CNAPS mitety vohitra
Atrik’asa natrehin’ny mpandraraha, mpampiasa sy mpiasa maro
�Tsy tongatonga foana izany fa mitaky ezaka sy tanjona tiana ho tratrarina�, isan’ny fehezan-teny nivoitra nandritra ny atrikasa naharitra telo andro, nokarakarain’ny CNAPS teto Toamasina, ny 3 ka hatran’ny faha 5 jona 2015 lasa teo. Fantatra tamin’izany fa ny lal�na no efa lany andro ka tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny, eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny zo tokony ho azon’ny mpiasa sy ny ankohonany. Ireo fiahina ara-tsosialy maro ihany koa ny tsy fampian’ny fandraisana andraikitra ataon’ireo mpiara miombonantoka toy ny mpampiasa, ny sendikaly, ny fanjakana sy ny mpiasa ihany koa.
Nampafantarina arak’izany ireo zo sy ny fiahina ara-tsosialy tokony hoazony mpiasa sy ny ankohonany mandritra sy aorian’ny fotoana niasany raha mahafeno ny fepetra ilaina amizany.
Tapaka taminin’ny izany fa hiara-hientana sy andray ny andraikitra tandrify azy avy ireo rantsa-mangaika ary ny mpiara-miombonantoka rehetra amin’ny fanentanana iaraha manatotosa. Raha hoan’ny haino amanjery sy ny mpanao gazety manokana dia, vonona hiaraka hifanome tanana hoentina hanatrarana ny tanjona natsangana. Arakizany, ny komity manokana hanatanteraka ny asa sy ny fanarahamaso ary ny fanetsehana ny volavolan-dalana izay efa natolotra ny fanjakana tamin’ny taona 2010, izay tsy mbola nazahoana valiny hatramin’izao.
Hialana ihany koa ny fomba fitenenana hoe �ho avy tsy ho ela toy ny volany CNAPS� fa nomena teny filamatra kosa Anio mikarakara ampitso mananjara .
(106) Marcelline : 06-06-2015 - 08:17